Ọ bụrụ na ị na-achọ nri ngwá ọrụ ka uzo iCloud ma ọ bụ ọbụna wepụ iCloud akaụntụ ị na-nri ebe. N'okpuru ebe a bụ n'elu 8in okwu nke arụmọrụ. Ngwá ọrụ ndị a na-arụ ọrụ nke ọma na-enyere gị uzo iCloud. Ka anya na onye ọ bụla n'otu n'otu.
1. iCloud uzo Ngwá Ọrụ
Ngwá ọrụ a bụ otu n'ime ihe ndị kasị Mmanu iCloud uzo ngwaọrụ na ahịa. O nwere ike ịbụ bara uru mgbe ị na-achọ ka uzo iCloud ebighị, wepụ ihe iCloud akaụntụ na ọbụna uzo na iCloud mkpọchi.
Ọ bụ nnọọ ọtọ na-eji maka ihe karịrị nnọọ otu nzube
Ọtụtụ ndị na-eji ndị ezi afọ ojuju na ngwá ọrụ a
Ọ na-arụ ọrụ fọrọ nke nta niile iOS ngwaọrụ
E nwere ihe ole na ole mkpesa banyere download ọsọ
N'agbanyeghị eziokwu na-eru ndị mmadụ ụtọ na a na ngwa, o nwere dịtụ ala mba nke dị nnọọ 3.5 kpakpando
iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPad Air, iPad Obere, iPad 4/3, iPad 2
Akwado iOS nsụgharị
Nke a bụ ngwá ọrụ ọzọ ga-enyere gị uzo iCloud kama mfe. Ọ na-arụ ọrụ niile Apple Devices. Ọ dị mfe iji na 100% kpamkpam free. Ndị na-eji ngwá ọrụ a ga-agba akaebe ya arụmọrụ. Ị pụkwara inwe mfe iso Nkuzi na-esi jiri ya na website.
ọ bụ kpam kpam free iji
The Nkuzi-enyere gị aka malitere na-eje ije gị site dum usoro
Ọ na-arụ ọrụ kasị iOS ngwaọrụ
The ngwá ọrụ si website bụ obere bit cluttered otú i nwere ike na-enweta ole na ole nsogbu achọta ihe ị na-achọ.
Ọ bụ ma na-gosiri ndị na-ji ya mere ọ dịghị doro anya aha fim maka ya.
3. Mepee m iCloud Easy Unlock Ngwá Ọrụ
Open mu iCloud Easy Kpọghe ngwá ọrụ bụ ihe ọzọ dị ọtụtụ ebe na ọtụtụ ebe ada ngwá ọrụ na-enyere gị Ị kpọghee ekwt ma ọ bụ uzo gị iCloud. Ọ dị mfe iji na nnọọ ngwa ngwa dị ka mma. Ọ na-abịa a nkuzi-enyere gị aka chepụta ya, na iji ya n'ụzọ dị irè.
Ọ na-ekwe ị Ị kpọghee ekwt ma ọ bụ uzo gị iCloud na n'okpuru nkeji 10
Ọ-arụ ọrụ niile iOS ngwaọrụ na niile iOS
Enye gị ohere iji ekwentị gị IMEI koodu Ị kpọghee ekwt gị iPhone
Ọ na-abịa na a Windows download
4. Doulci iCloud akpọchi Ngwá Ọrụ
Ngwá ọrụ a bụ otu n'ime ihe ndị kasị oru oma. Ọ dị mfe iji na-arụ ọrụ niile iOS ngwaọrụ gụnyere iPod Touch. Ọ bụghị onye na UI ngwá ọrụ na ga-ya mere ekwe ka ị na-agba ọsọ na gị onwe gị iCloud uzo nkesa.
Ọ na-arụ ọrụ niile iOS ngwaọrụ na na niile iOS
The Ngwá Ọrụ si website nwere ịrịba nkwado na Nkuzi i nwere ike iji
Ị nwere iji wuchaa a nnyocha e mere na-ekwe ka ibudata ngwá ọrụ
All iPhone ụdị, niile iPad ụdị, niile iPod aka ụdị
Onye a ọzọ bụ nke a ọrụ karịa a ngwá ọrụ ma ọ na-arụ ọrụ ọtụtụ otú ahụ dị ka ngwá ọrụ ndị anyị ugbua hụrụ. The iCloud ebighị na mkpọchi mwepụ ọrụ awa ebe a bụ otu nke kasị mma na azụmahịa na ebe ọ bụ na a ọrụ e nnọọ nta ohere nke ihe na-aga na-ezighị ezi.
Ọ bụ a ọrụ ozi na-agba ọsọ site ọkachamara otú ị ga-enwe nchegbu banyere otú iji ihe ọ bụla software
Ọ dị mfe na oru oma
The ọrụ nwere oké aha n'etiti ndị na-eji ya n'ihu
Ị ga-akwụ ụgwọ maka ọrụ ahụ. The ahịa bụ site $ 19.95 na ego ị na-akwụ na-adabere na ngwaọrụ gị.
Service URL: https://www.officialiphoneunlock.co.uk/activation-lock-removal.php?gclid=CjwKEAjw67SvBRC1m5zPv4GboAUSJAB6MJlkLd71FLegeuPc0TL41z63G3b-8RWGMpbm3soItpdb8RoCBX_w_wcB
6. uzo iCloud ebighị Ngwá Ọrụ
Ngwá ọrụ a na-ejikọ ozugbo na Apple sava iji rụọ ọrụ iCloud. Ọ bụkwa a dị mfe iji ad otu nke ndị inweta ewu ewu nwayọọ nwayọọ na-adịbeghị.
Ọ dị mfe ibudata na-eji
The ngwá ọrụ si website enye gburugburu elekere nkwado maka ọ bụla mbipụta ị nwere ike
Ọ na-ubé ọzọ mgbagwoju anya iji mee ihe karịa ndị ọzọ anyị hụrụ n'elu
7. Wepụ iCloud ebighị mkpọchi Ngwá Ọrụ
Ngwá ọrụ a-enye gị ohere-enwe ike uzo iCloud nnọọ mfe. The Ngwá Ọrụ si website nakwa awade ị ọmụma bara oké uru na otú iji ngwaọrụ dị nnọọ ka ọ dị mfe. Ọ bụkwa 100% free.
Mmepe na-enye gị oké nkwado na ọmụma
Ọ dịghị nwere a nnọọ elu fim n'etiti ọrụ
Onye a na-arụ ọrụ otú dị ka ndị ọzọ ndị anyị hụrụ n'elu bụ ezie na ọ na-otoro na ịbụ otu n'ime ndị top ngwaọrụ-uzo iCloud ebighị. Ọ dị mfe iji ọ bụ ezie na GadgetWide otú na-enye gị na-akwado na Nkuzi kwesịrị ị na-rapaara na ọ bụla nke.
Otu n'ime ndị kasị ukwuu gosiri ngwaọrụ na ahịa
Ọ bụ free ibudata na-eji
Ukwuu irè ma dị mfe iji
Ị nwere ibudata software na kọmputa gị tupu i nwere ike iji ngwá ọrụ a
A Full Guide na Olee otú ka mmekọrịta iPhone na iCloud
Olee otú ndabere iCloud Ndi ana-akpo ka PC
> Resource> iCloud> Top 8 iCloud uzo Ngwaọrụ